दशैंमा फेसनेवल र स्टाइलिस देखिन कस्तो पहिरन छनौट गर्ने ? - Kendrabindu Nepal Online News
दशैंमा फेसनेवल र स्टाइलिस देखिन कस्तो पहिरन छनौट गर्ने ?
काठमाडौं । फेस्टिभ सिजन सुरु भइसकेको छ । हरेकले यो सिजन पर्खिरहेका हुन्छन् । किनभने यो एक मौका हो रमाइलो गर्ने, मस्ती गर्ने । हर कोही चाडपर्वको विशेष अवसरमा स्टाइलिस र स्पेशल देखिन चाहन्छन् । चाडपर्वको लागि पहिरन छनौट गर्दा हल्का, सहज, हेर्दा आकर्षक, स्टाइलिस र फेस्टिभ लुक्स दिने खालको हुनुपर्छ । चाडपर्वमा क्लासिक फेसन चल्तीमा हुन्छ । परम्परागत पहिरनमा सजिनेहरु पनि धेरै हुन्छन् ।
अहिलेको बजारमा इन्डो वेस्र्टन, ट्रेडिसनल र वेस्ट्रन पहिरनलाई फेस्टिवल टच दिईएको छ । विशेष गरी पुरुषहरु मौलिक पहिरन दौरा सुरुवाल, ढाका टोपीमा सजिन्छन् । भने महिलाहरुको रोजाई अलि फरक हुन्छ । उनीहरु नेपाली पहिरन गुन्यू चोलीमा होइन गाउन, लेहेंगा, साडी, कुर्ता सुरुवाल जस्ता पहिरन बढी मन पराउछँन् ।
आज हामी चाडपर्वको अवसरमा कस्तो पहिरन फेसनमा आउँछ ? कस्तो रङ र फेब्रिकको माग बढि छ ? भन्ने बारेमा चर्चा गर्दैछौं । यसको लागि केन्द्रविन्दुकर्मी सुजाता मुखियाले पानीपोखरीस्थित मृगतृष्णा फेसन हाउसकी फेसन डिजाइनर तृष्णा गुरुङसँग कुराकानी गरेकी छन्ः
१. अहिलेको दशैँमा कस्तो खालको पहिरनको माग बढि छ ?
अहिले कुर्तामा स्ट्रेट खालको कुर्ता चलेको छ । अनारकली, कलिदार अनि साडीमा सिफनको साडी र टिनएर्जसको लागि वान पिस चलेको छ ।
२. कस्तो खालको फेब्रिक र रङ चलेको छ ?
रङमा ब्राइट कलर नै चलेको छ । मर्जेन्टा, पिंक कलरको बढि माग हुन्छ । भने फेब्रिकमा जर्जेट, सिफन चलेको छ ।
३. गृहणीहरु दशैँको समयमा बढी कामका व्यस्त हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सजिलो र फेसनेवल पनि देखिनको लागि उनीहरुकोे लागि कस्तो खालको पहिरन उपयुक्त हुन्छ ?
साधारण सिफनको साडीमा थोरै बोर्डर राखेर हेभी खालको ब्लाउज लगाउँदा राम्रो फेसनेवल पनि देखिन्छ र क्यारी गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
४.बच्चाको लागि कस्तो पहिरन उपयुक्त हुन्छ ?
बच्चाहरुलाई ब्राइट कलरको पहिरन नै राम्रो हुन्छ । सेतो रङको पहिरनमा दशैंमा टिकाको रङ लाग्ने, दाग लाग्ने भएकोले सेतो रङ नलगाउनु नै भन्छु म ।
५. ट्रेडिसनल लुक्स देखाउनको लागि कस्तो खालको पहिरन सुझाव दिनुहुन्छ ?
ट्रेडिसनल लुक्स देखाउनको लागि एम्ब्रोइडरी गरेको अनारकली नै राम्रो हुन्छ । ज्वेलरी पनि धेरै लगाउनु पर्दैन् ।
६. कस्तो खालको वर्ण र उचाई भएको युवतीलाई कस्तो खालको पहिरन लगाउँदा राम्रो देखिन्छ ?
रेड कलरको पहिरन सबैलाई राम्रो देखिन्छ । डार्क टोन भएकाहरुलाई मरुन, रेड, अरेञ्ज कलर राम्रो देखिन्छ भने गोरो वर्णको युवतीहरुलाई जस्तो कलर पनि सुहाँउछ । स्ट्रेट कुर्ता लगाउँदा राम्रो देखिन्छ । स्ट्रेट पाइन्टमा कुर्ता र दोपट्टा लगाउँदा अग्लो दुखिन्छ ।
Prevजब पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र मुम्बईमा लक्षचण्डी यज्ञमा सहभागी भए
चक्र बास्तोलाको निधनले कांग्रेसको चियापान सर्यो, अब कात्तिक १६ गतेNext